Bandhigga Caalamiga Ah ee Buugta oo Garoowe Ka Furmey -SAWIRO • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Puntland News / Bandhigga Caalamiga Ah ee Buugta oo Garoowe Ka Furmey -SAWIRO
Bandhigga Caalamiga Ah ee Buugta oo Garoowe Ka Furmey -SAWIRO
Waxaa maanta oo Isniin ah si rasmi ah caasimadda Puntland ee Garoowe uga fumry Bandhiiga Caalamiga ah ee buugta oo noqonaya kii saddexaad, kaas oo lagu soo bandhigaayo buug cusub iyo kuwo hore labadaba.
Munaasabadii furitaanka waxaa ka qayb galay Madaxweynaha Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas, marwadiisa Hodan Siciid Ciise qaar kamid ah golaha wasiirada, Aqoonyahan caan iyo dadka sida weyn loogu yaqaano qalinka sida Maxamed Daahir Afrax oo mar madax u ahaan jirey dallada qalinleyda Soomaalida. Sidoo kale waxaa munaasabadda ka soo qaybgalay madaxa shirkadda daacabadda buugta Maxamed Sheekh Xasan.
Munaasabadda waxaa si rasmi ah xariga uga jaray Madaxweynaha Puntland.
Madaxweynaha Puntland ayaa khudbadiisi ku soo bandhigey Carwada buug uu dhawaan qoray ugana hadlaayo Dowladii kumeel-gaarka ahayd ee uu wasiirka iyo raysalwasaaraha ka noqdey 2011-2012, kaas oo ku qoran far Ingriisi.
Cabdiweli Casli Gaas Madaxweynaha Puntland ayaa khudbad kooban oo furitaankii ayaa ka ahdley bilowgii bandhigga carwada buugta ee Garoowe lagu qabto waxaana uu yiri:
“Annagu bandhigan asaaskiisa wax baan ka ogeyn, waxaan dhisi doona Akademiyadda horumarinta dhaqanka iyo afka Soomaaliyeed, waa afar qeybood oo ah meel taariikhda lagu ururiyo , Maktabad gaar ah oo taariikhdeena lagu kaydiyo, oo aan ku keydsano buugaagta ka hadlaysa taariikhda iyo horumarinta suugaanteena, iyo tan u danbeysa oo ah tiyaatar Qaran oo ah meel dadka suugaanleyda ah isugu yimaadaan, kusoo bandhigaan aqoontooda iyo bibadooda” ayuu yiri Madaxweynaha Puntland.
Madaxweynaha Puntland ayaa shacabkii ka soo qayb-ghalay munaasabadda ku dhiiri geliyey muhimadda ay leedahay wax akhrisko, waxaana uu sheegay in buugta loo qarey in la iibsado oo la akhristo, taas oo waxtar u noqoneysa qoraaga.